Sivy no Maty ary Maro ny Maratra tao Amin’ny Fiangonana Kristiana Iray tao Queta, Pakistana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Janoary 2018 15:55 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Français, Türkçe, Español, English
Manohitra ny fanafihana ny mpikambana ao amin'ny fiaraha-monin'izy ireo ao Lahore tamin'ny taona 2013 ny kristiana vitsy an'isa ao Pakistan. Sarin'i Rajput Yasir. Copyright Demotix (10/3/2013)
Araka ny tatitry ny fampitam-baovao, matin'ny polisy talohan'ny hidirana tao amin'ny trano Fiangonana ny iray tamin'ireo mpanafika roa ireo. Mpanafika roa hafa izay nikasa ny hiditra tamin'ny varavarana ambadika ihany koa no mbola tsy hita raha nanohy ny fikarohana ny polisy. Efa ho herinandro talohan'ny Krismasy no nitranga ny fanafihana ary nanozongozona ny fiarahamonina vitsy an'isa ao Pakistana. Nanao fanambarana ho tompon'andraikitra tamin'ny fanafihana ny Fanjakana Islamika
Niditra tao amin'ny media sosialy ny olona hanameloka ny fanafihana sy haneho firaisankina amin'ny fianakavian'ireo maty sy amin'ireo naratra. Nanameloka ny fanafihana tao amin'ny Twitter ny mpiserasera Dua Fatima Khan:
Manameloka mafy ny fanafihan'ny mpampihorohoro ao #Quetta aho. Mitodika any amin'ireo fianakavian'ny maty ny eritreritro ary mivavaka ho an'ireo maratra. #Pakistan
Hoy i Mehr Tarar, mpanao gazety nisioka:
Fivavahana sy fiaraha-miory amin'ny fianakavian'izay rehetra novonoina tamin'ny fanafihana ny fiangonana tao Quetta.
Ambany ny isa azo omena ny fiarahamonina iray raha mila mpiambina ny moskea, ny fiangonana, ny imambarghas na ny tempoly.
Ho setrin'ireny fanafihan'ny mpampihorohoro ireny, nanomboka naneho ny fanohanany ny fampiharana ny National Action Plan (NAP) [Planina Hetsi-Pirenena] indray ny olona, ​​drafitra iray natsangana hiadiana amin'ny fampihorohoroana tamin'ny taona 2015. Novolavolaina taorian'ilay zava-nitranga nahatsiravina tao amin'ny Sekolim-panjakan'ny Tafika tany Peshawar, Pakistan io drafitra io, izay nahafatesana olona miisa 149, ary ankizy ny ankamaroany .
Vakio ihany koa: Iray volana izay, mitaky ny tsy hanadinoana mandrakizay ny fandripahana ankizy tao Peshawar ny Pakistaney
Niditra tao amin'ny Twitter i Rehan Khan, mpanatontosa sarimihetsika hitsikerana ny governemanta:
Fanafihana hafa. Randram-panamelohana hafa. Tsy hita ny Plan Action National #Quetta
Aza kivy amin'ny fanafihan'ny mpampihorohoro.
Fiaraha-miory amin-kitsim-po amin'ireo izay namoy ny havan-tiany.
Niantso ny governemanta mba handray andraikitra ilay mpihira Hamza Ali Abbassi :
Manafika ny zavatra rehetra azony tafihana, sekoly, tsena, hotely, trano fivavahana, tempoly ary fiangonana ireo fahavalon'i Pakistana sy ny olombelona rehetra. Ny vavaka ho an'ny fanahy lasana sy ny fanontaniana tokana ho an'ny governemanta dia: Tsy afaka manafoana ny fampihorohoroana raha ny mpitandro filaminana irery, RAHOVIANA IANAREO NO HAMPIHATRA NY PLANINA HETSI-PIRENENA ?
Nisioka sary ahitana ny mpitari-pivavahana avy amin'ny finoana rehetra naneho ny firaisankinany amin'ny fiarahamonina kristiana ilay mpanao gazety tsy miankina, Syed Hussain:
Mandray anjara amin'ny hetsika iray hikarakarana ireo tra-boinan'ny fanafihana viveriniainy tao amin'ny Katedraly Sacré Coeur ny #kristianina sy ny ireo mpitari-bavaka avy amin'ny fivavahana hafa #LAHOREpic.twitter.com/ZtdqvfzYPF
Fiarovana ny vitsy an'isa any Pakistana
Mandrafitra ny eo ho eo amin'ny 1,6% amin'ny mponina 200 tapitrisa any Pakistana ny kristiana ary voavakavaka nandritra ny taona maro. Tany Lahore no nitranga ny iray amin'ireo fanafihana nahafaty be indrindra tany Punjab tamin'ny Paska tamin'ny taona 2016, namono olona maherin'ny 70, ka nisy ankizy maromaro anisan'izany.
Hoy ny siokan'ilay Imam Tawhidi:
Nifoha aho tamin'ny sarin'ireo ankizy novonoina tao #Quetta noho izy ireo Kristianina. Tsy zava-baovao izany Kristianina nokendrena tamin'ny Krismasy izany, na izany aza tsy manana tetikady fiarovana mahalala zavamisy ny governemanta Islamika ao Pakistana ho fiarovana ny vitsy an'isa.
Nisioka ny i Musharraf Zaidi, mpanao gazety sady mpikatroka:
Septambra 2013, Fiangonan'ny Olo-Masina Rehetra Peshawar
Marsa 2015, Fiangonana Youhanabad Lahore
Marsa 2016, Zaridainan'i Gulshan Iqbal Alahadin'ny Paska, Lahore
Azafady mba ampio aho hanazava ny fomba hiarovantsika ireo rahalahy sy anabavintsika Kristiana
Tsy vaovao ny fanenjehana ireo mpanaraka fivavahana vitsy an'isa ao Pakistana; hatramin'ny taona 2015, olona maherin'ny 200 no maty ary maherin'ny 300 no naratra nandritra ny fanafihana toy izany.
Vao haingana, nisy ihany koa ny fanavakavahana ny vitsy an'isa tao amin'ny governemanta. Nangataka ny hanovana ny anaran’ ny Departemantan'ny Fizika ao amin'ny Oniversite Quaid-e-Azam, izay nantsoina hoe Dr. Adbus Salam, noho ny nahazoany ny Loka Nobel ny miaramila kapiteny iray misotro ronono antsoina hoe Muhammad Safdar Awan, izay mpikambana ao amin'ny Antenimieram-Pirenena ankehitriny. Koa satria anisan'ny vondrom-piarahamonina Miozolomana vitsy an'isa Ahmadiyya i Salam dia heverin'ny sasany ho hetsika fanavakavahana ilay vondrona ilay fangatahana fanovana anarana.
Ho an'ny vitsy an'isa ao Pakistana, fampahatsiahivana iray hafa ny fanafihana tao Quetta ity fa tsy ho afaka hampihatra ny zony fototra hivavaka am-pahalalahana, tsy misy tahotra ny hovonoina, ry zareo – mandra-piadiana ny fankahalana sy ny tsy fifandeferana ara-pinoana.